Fanjakana tsara tataka ! - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Tsaroako ny fahiny ! efa lohatenin’ny lahatsoratry ny Lakroa fony fitondrana Rajaonarimampianina izy ity. Ny antony dia satria nanjaka ny kolikoly ary manao dia mianotra ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana. Rehefa manjaka ny kolikoly dia mazava loatra fa mihamanalavitra ny fanjakana tsara tantana isika satria tsy afaka miady amin’ny kolikoly. Lafin-javatra roa tsia azo sarahana amin’ny ady amin’ny fahantrana izany. Rehefa ratsy tantana ny fanjakana dia manjary, « fanjakana tsara tataka ».
Ankehitriny moa dia mifatratra amin-dRamatoa Claudine Razaimamonjy sy Andriamatoa Mbola Rajaonah ny fahotana mahafaty rehetra fony fitondrana Rajaonarimampianina. Ny praiminisitra tamin’izany anefa mangatsiatsiaka fotsiny. Amin’izao fitondrana izao koa angamba mbola ho teraka ny « Claudine Razaimamonjy sy Mbola Rajaonah vaovao ». Fa toa lamaodin’ny fitondrana mifandimby ireny famantaran-dahy sy vavy ireny.
Raha miverina ny lahatsoratra dia midika tsotra fa mbola tsy niova ny zava-misy, ary azo lazaina aza fa mihamanalavitra ny « fanjakana tsara tantana isika » fa manao hitsin-dalana amin’ny « fanjakana tsara tataka », tsy ny kolikoly fotsiny fa ny fanjakana tsy tan-dalàna. lafin-javatra telo no asongadina.
Voalohany, ny tsy fanajana ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana. Mimenomenona ny Anteminieran-doholona fa tsy mbola voarainy ny vola hiasan’izy ireo. Ilay tetibola hiasana no gejain’ny mpanatanteraka. Manao izay saim-pantany ny mpanatanteraka amin’ny andrim-panjakana hafa. Mifamototra izany amin’ny tany demokratika. Ilay natao ho arahi-maso indray no manjakazaka amin’ny fahefana tokony hifehy azy. Dia mandeha ambony lalàna izy… omena izay tiana omena ; fenjaina izay tiana ho fenjaina. « Fanjakana mpanataka » koa ve izany ?
Fa ny lafiny faharoa amin’izany dia ny filazana fa nalefa any amin’ny kere any Atsimo ny vola, na tsy voasoratra amin’ny tetibolam-panjakana aza. Tsy tahotra tsy henatra fa mamilivily ny volam-panjakana amin’izay metimety aminy ny mpanatanteraka. Ny filoha moa nilaza rahateo fa ahavitana oniversite maro io tetibola io. Dia mihodina izy izao. Azon’ny mpanatanteraka atao ny manodinkodina ny lalàna sy ny vola. Dia hitsin-dalana mankamin’ny « fanjakana tsara tataka » izany.
Fa mbola hitsiny fahatelo koa ilay resabe momba ny fanangonan-tsonia nataon’ny Anteminiera, nilaza fa tsy ampy ny vola nomena azy ireo. Tsy ampy handoavana ny karama izay nampiakarina 13%. Dia misy mandidy dia homana. Ary nisy aza ny fanangonan-tsonia ny hanalana ny minisitra. Natahotra izany ny mpanatanteraka dia nanome ny vola. Araka ny voalazan’Andriamatoa Rivo Rakotovao, filohan’ny Anteminieran-doholona dia tsy manaraka ny lalànan’ny tetibola io fa dia navoaka fotsiny amin’izao, satria misy fahefana mandidy dia homana tsy manaraka ny voafaritry ny lalàna. Dia mizotra amin’ny hitsin-dalan’ny fanjakana tsara tataka isika.
Tsy ho lazaina ny zavatra samihafa, santionany ireny ary mivandravandra toy ny tafika andrefa-tanàna. Tsy misy mahafehy ny mpitondra na lalàna na fahefam-bahoaka. Tsy misy hajainy na rafitra na fitsipi-pitantanana. Mbola hitranga ireo tolotr’asa samihafa nahabe resaka toy ny bonbons 8 miliara, ny écran goavana niadiana tamin’ny COVID 19. Ilay repoblika mihitsy no lasa repoblika tsara tataka !!! Fa mbola tsy naheno mpitondra isika nilaza fa tsy misy olona ambony lalàna ary ny raharaham-pirenena tsy hananan-kavana na azo anaovana kiantranoantrano ! Dia ny omaly tsy miova e !